Waa tee Kooxda uu wadahadallada la galay xiddiga Manchester City ee David Silva si uu ugu biiro xagaaga soo socda? – Gool FM
(Manchester) 14 Nof 2019. Ciyaaryahanka ka tirsan kooxda Manchester City ee David Silva ayaa la soo sheegayaa inuu wadahadallo la galay Naadi cusub si uu ugu biiro.
Kabtanka Manchester City ee David Silva ayaa lagu soo waramayaa inuu wadahadallo la galay Kooxda Vissel Kobe ee ka dhisan Japan xilli ay labada dhinac ka wada hadleen suurto-galnimada uu xagaaga ugu biiri karo naadiga uu haatan ka tirsan yahay xiddigii hore khadka dhexe ee kooxda Barcelona, Andres Iniesta.
33-sano jirkaan oo u dhaqaaqay Etihad sanadkii 2010-kii ayaa la rajeynayaa in uu isaga tago kooxda marka uu qandaraaskiisu dhacayo bisha June ee sanadka dambe.
Silva ayaa la la xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxo dhowr ah oo ay ku jiraan sida Las Palmas iyo sidoo kale Inter Miami oo ah kooxda cusub ee David Beckham ee ka ciyaarta horyaalka MLS-ka.
Dhanka kale, Man City ayaa bilawday dalabkeeda ay ku doonaysay inay ku hesho booska badelka Silva, iyadoo warar soo baxayay ay sheegayeen in xiddiga khadka dhexe ee Real Madrid Isco loo arko inuu yahay dooqa koowaad ee hoggaamiye Pep Guardiola.
Sida uu warinayo El Chiringuito TV, Xiddiga reer Spain ayaa ugu dambeyn go’aansan kara inuu la ciyaaro saaxiibkiisii hore ee xulka qaranka Spain ee Iniesta, maadaama iminka uu wadahadallo la yeshay Kooxda Kobe.
Kooxda reer Japan waxay ku faantaa xulashooyin xiddigo waa weyn oo safkooda ay ku haystaan sida Iniesta, Lukas Podolski, Thomas Vermaelen iyo Sergi Samper.